यी हुन् मधेसवादी दलमा निटिकेका नेताहरु, धरापमा मधेसवादी दल ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन् मधेसवादी दलमा निटिकेका नेताहरु, धरापमा मधेसवादी दल !
काठमाडौं, कात्तिक १६ । नेपाली कांग्रेसको विभाजन भई २००८ सालमा गठन भएको तराई कांग्रेसले मधेसवादी राजनीतिको थालनी गर्यो । तर उक्त दल पनि केही बर्षमै समाप्त भयो ।
लामो समयको अन्तरालपछि २०४६ सालबाट मधेस केन्द्रीत दल नेपाल सद्भावना पाटीको विस्तार भयो । तर अहिले सदभावना पार्टी पनि समाप्त भएर सदभावनाका नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिको दौडमा लागेका छन् ।
पहिलो मधेस आन्दोलनबाट ‘मधेस’ शब्द राखेर उपेन्द्र यादवसहितले राजनीति सुरु गरे पनि पछिल्लो समय यादव पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दौडमा छन् ।
मधेसवादी मानिएका प्रमुद दुई दलले पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाउनका साथै विधानमा पनि राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा आफूलाई चित्रण गरेका छन् ।
मधेसवादी राजनीतिक दलमा परिवर्तनसँगै मधेसवादी दलका नेताहरु पनि ‘वाद’ र संगठन परिवर्तनमा होमिएका छन् । जसले गर्दा मधेसवादी राजनीतिसँगै मधेसवादी नेताहरु पनि धरापमा परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सबै मधेसवादी दल एउटै झन्डामुनि आउनुपर्ने प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाबाट कयौं मधेसी मुलका नेतारु मधेसवादी राजनीतिमा आए ।
तर संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा आउँदा अधिकांश नेताले मधेसवादी राजनीतिलाई त्यागेका छन् । -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: madesi dal